10 संसारको सर्वश्रेष्ठ स्टेकहाउसहरु | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा सुझाव > 10 संसारको सर्वश्रेष्ठ स्टेकहाउसहरु
जब तपाईं शब्द स्टेकहाउस सुन्नुहुन्छ, तुरून्त तपाईले कि त अमेरिका वा यूरोपको बारेमा सोच्नुहुन्छ. तथापि, यी गाईवस्तु पाल्नु र स्टेक खपत मात्र ठाउँहरू छैनन्. वाग्यु ​​र कोबे, जुन विश्वमा सब भन्दा राम्रो गोमांस कटौती मानिन्छ, जापानबाट उत्पन्न भयो. यसबाहेक, पोर्तुगल र अर्जेन्टिना जस्ता स्थानहरू विशेष उल्लेखको योग्य छन्.
एक विशेष क्षेत्रको घाँस-पोषित गाईवौंको त्यो विशेष क्षेत्रसँग सम्बन्धित एक उत्तम स्वाद हुनेछ. त्याे भनेपछि, स्टेकको जुसी काट्नु भनेको मासु प्रेमीहरूको बहुमतको लागि जाने विकल्प हो. हामीले यो सूची क्यूरेट गरेका छौं 10 संसारको सर्वश्रेष्ठ स्टेकहाउसहरु, जुन तपाइँको मा हुनु पर्छ बाल्टिन सूची यदि स्टेक तपाइँको मनपर्ने खानाहरु मध्ये एक हो.
१. गुडम्यान स्टेकहाउस, लन्डन
विश्वको सर्वश्रेष्ठ स्टेकहाउस मध्ये एक हो, गुडम्यान मूल रूपमा न्यू योर्कको हो. गुडम्यानले लन्डन शाखा खोले 2008, र फ्रान्चाइजी पछि बढि तीन स्थानहरूमा विस्तार भयो.
रेस्टुरेन्ट एक मिशेलिन स्टार सम्मानित गरिएको छ र यसको संरक्षकहरु लाई मनपर्दछ किनभने यसको छाला र काठ एक्सेन्टले न्यु योर्कको नक्कल बनाउँदछ. ग्राहकहरूले स्पेनबाट छनौट गर्न विकल्प पाउँदछन्, बेलायत, वा अमेरिका कटौती. रेष्टुरेन्टहरूले यसको मासु साइटमा उमेर दिन्छ र यसको रिब आँखामा गर्व लिन्छ.
2. म्यानकी स्टिकहाउस, टोलेडो
टोलीडोमा मन्सीको स्टिकहाउस, ओहियो, एक प्रतिष्ठान हो. स्टीकहाउस स्थापना गरिएको थियो 1921 र, यदि स्थानीयलाई विश्वास गर्न सकिन्छ, दिन देखि प्याक गर्न जारी छ 1, एक हप्ता दिनमा पनि. यो जाँच गर्न सल्लाह दिइन्छ टोलेडो मौसम रडार त्यहाँ जानु भन्दा पहिले तपाईले भित्र जानका लागि केहि बेर पर्खनु पर्ने हुन सक्छ.
एक दिन छनौट गर्न उत्तम जब टोलेडोको मौसम रमाइलो छ, र बाहिरको पर्खाइले तपाईंको भित्री भित्रमा के हुनेछ भन्नेको आशा मात्र बढाउँदछ, तपाईंलाई कहिँ पनि फिर्ता लिन जबरजस्ती नगर्नुहोस्. मन्सीको स्टीकहाउसले यूएसडीए प्रमाणित एंगस सेवा गर्दछ, र एंगस प्राइम स्टीक्स जुन बुढेस र साइटमा बुचरेड छन्. रेगुलरहरूले यहाँ प्रस्तुत समुद्री खानाको पनि कसम खान्छन्, विशेष गरी अलास्कन किंग क्र्याब र अष्ट्रेलियाली लब्स्टर.
3. वुल्फगैंग पक द्वारा कटौती, सिंगापुर
वोल्फग्या P्ग पकलाई कुनै परिचय चाहिदैन. अस्ट्रियामा जन्मेका अमेरिकी सेलिब्रिटी शेफ र रेस्टोरटरले आफ्नो पहिलो एशियाली रेस्टुरेन्ट खोले मारिना बे स्यान्डमा CUT, सिंगापुर, मा 2010. जब देखि CUT साम्राज्य विश्वव्यापी रूपमा विस्तार भएको छ, तर सिंगापुर शाखा सबैभन्दा राम्रो हुन जारी छ.
संरक्षकहरूले विश्व-स्तरीय कोबेको मजा लिन सक्छन्, 300-दिन अन्न अनाज पोषित Angus, वा A5 Wagyu. यस स्थापनाको विशेषता इन-हाउस सॉसको एरे र विस्तृत मदिरा संग्रह हो जुन स्टेकको प्राइम कटसँग राम्रोसँग जान्छ।.
4. आरगावा, टोक्यो, जापान
टोकियोको एरागावा संसारकै सब भन्दा महँगो स्टीकहाउस हो. मिशेलिनले ताराred्कित रेष्टुरेन्ट यसको शेफको लागि परिचित छ – यामदा जिरो, जसले संसारमा सब भन्दा राम्रो कोबे मासु सेवा गर्दछ.
यस रेष्टुरेन्टको युएसपी भनेको यो हो कि यसले यसको सुरूवात भएदेखि शुद्ध ब्रीड ताजिमा गाईवस्तुहरूको बथान बढाउँदछ 1967. उत्कृष्ट क्वालिटी नियन्त्रण र प्याकको choicest छनौट प्याराको सेवा प्रदान गर्दै अरगावालाई लक्जरी डाइनिंग विकल्प बनाउँदछ.
5. पिटर लुगर, न्यूयोर्क
यो परिवार-द्वारा संचालित व्यापार यसको यूएसडीए प्राइम बीफ प्रमाणीकरण मा गर्व गर्दछ. तिनीहरूले मिडवेस्ट र सुक्खा उमेरबाट उत्तम मासु आयात गर्दछ यो परिसरमा. यो एक मिशेलिनले ताराred्कित रेस्टुरेन्ट पनि पुरानो हो, मा स्थापित भएको छ 1887.
यस ठाउँलाई न्यु योर्क शहर भोजन दृश्यको प्रतिमा र धेरैले गुजारा गर्ने संस्कार मानिन्छ. पोर्टरहाउस स्टेक, सुक्खा-उमेर को लागि परिसर मा 28 दिन, जर्मन फ्राइड आलु र इन-हाउस सॉसको साथ सिफारिश गरिएको पकवान हो.
6. एन्टिका ओस्टेरिया नान्डोन, टस्क्यानी
टस्कनीमा पाओलो मुग्नाईद्वारा सञ्चालित, एन्टिका ओस्टेरियाले यसको ढोका खोल्यो 2007 र एक देहात छ, एक प्रीमियम भोजन अनुभव को लागी पुरानो-विश्व महसुस. रेस्टुरेन्ट यसको बिस्टेका अल्ला फिरेन्टीनाको लागि परिचित छ, भाला वा गाई र टस्कन भोजनमा महत्त्वपूर्ण डिशबाट बनेको इटालियन स्टेक.
एन्टिका ओस्टेरियामा खाने अनुभवको मुख्य आकर्षण भनेको हड्डीको मासु तयार पार्ने शेफ तपाईको अगाडि तुस्कान जैतुनको तेल र समुद्री नुनको केही प्रयोग नगरी तपाईको अगाडि नै हो।.
शिकागो मा, गिब्सन बार र स्टीकहाउस उनीहरूको आफ्नै प्राप्तिको लागि देशको पहिलो रेष्टुरेन्ट श्रृंखला भएकोमा गर्व गर्दछन् युएसडीए प्रमाणीकरण प्राइम एंगस गोमांसको लागि.
रेस्टुरेन्ट यसको कालो Angus गाईहरूको लागि परिचित छ, मकै-खुवाइन्छ 120 दिनहरू र त्यसपछि सुक्खा-उमेरका लागि परिसरमा 40 दिन. शिकागोका स्थानीयहरू यहाँ WR को शिकागो काटिएको मासुको कसम खान्छन्, छेउमा डबल बेक्ड आलुहरू, र प्रसिद्ध गिब्सन मसाला नुन.
8. ग्रिलहाउस, जोहानसबर्ग
जोहान्सबर्गको ग्रिलहाउस दक्षिण अफ्रिकाको सर्वश्रेष्ठ स्टिकहाउस मानिन्छ. न्यूयोर्क शैली ग्रिल घर विश्व स्तरीय मसाला क्रस्टेड पट्टिका र प्रीमियम एकल माल्ट संग उत्कृष्ट पसलियों को सेवा को लागी परिचित छ र स्थानीय मदिरा.
यो ठाउँ यसको ढिलो भुनी प्राइम रिबका लागि प्रसिद्ध छ, जुन नौ देखि बिचको बीच कहाँबाट कम आगोमा पोलेको छ 12 घण्टा. स्थानको अन्य विशेषताहरूमा टी-हड्डी र रम्प समावेश छ. के यस रेस्टुरेन्टलाई अलग सेट गर्दछ उत्कृष्ट सेवा स्टाफको साथ प्रीमियम दक्षिण अफ्रिकी गोमांस स्टेक्स हो.
9. ला कैबाना, ब्यूनस आयर्स, अर्जेन्टिना
हामीले परिचयमा उल्लेख गर्यौं, अर्जेन्टिना क्षेत्र विशेष स्वादको साथ कोमल र रसदार गाई उत्पादन गर्न उत्तम क्षेत्रहरू मध्ये एक हो. ला काबाना ब्यूनस आयर्समा सबैभन्दा धेरै रेस्टुरेन्टहरू मध्ये एक हो, शहरको पोष्ट स्थानमा अवस्थित छ.
रेस्टुरेन्टमा बिहानको खाजामा स्टीकहरू दिइन्छ, भोजन, र बेलुकाको खाना. केहि सजिलो सिफारिशहरु मा तिनिहरु को हड्डी स्टेक समावेश छ, बच्चा गोरुको मासु, प्राइम रिब, र पातलो पट्टी पसलियों. रेस्टुरेन्टले तपाईंको स्टेकको साथ जानको लागि स्थानीय फाइन मद्यको विस्तृत संग्रह पनि प्रस्ताव गर्दछ.
10. Caprice, लियोन, स्पेन
लियोनमा एल क्याप्रिको, स्पेन, मासु प्रेमीहरूद्वारा तीर्थयात्रा मानिन्छ किनकि यो पूर्ण रूपमा पिटेको ट्र्याकबाट टाढा छ, सबैभन्दा लोकप्रिय बाट टाढा पर्यटक आकर्षण स्पेनमा. लियोनमा अवस्थित, एल क्याप्रिको जोस गोर्डन द्वारा संचालित हो, एक रेस्टोरटर, शेफ, र किसान.
रेस्टुराँ मासुको मासु पाउँनका लागि परिचित छ गोरूहरू र पुराना गाईहरू इबेरियन प्रायद्वीपबाट सात देखि तेह्र वर्षको उमेरका बीचमा. एक पटक मार्न, गोमांस सुक्खा-उमेरको लागि हो 160 दिन, जुन सामान्य भन्दा धेरै उच्च छ. संरक्षकहरूले टी हड्डीहरूको आनन्द लिन सक्दछन्, enrecote, वा sirloin एक खुला फायर ग्रिल मा पूर्णता को लागी ग्रील्ड, उत्कृष्ट स्थानीय शराब को एक गिलास संग जोडी.
यसले विश्वको शीर्षको सूची समाप्त गर्दछ 10 सबै भन्दा राम्रो स्टीकहाउसहरू. यदि तपाईं आफूलाई स्टेक प्रेमी ठान्नुहुन्छ, यी मध्ये प्रत्येक एक तपाइँको बाल्टी सूची मा हुनु पर्छ.
यहाँ मा एक ट्रेन सेव, हामी तपाईंलाई एक foodie यात्रा को योजना मा मद्दत गर्न खुशी हुनेछौं 10 संसारको सर्वश्रेष्ठ स्टेकहाउसहरु.
के तपाइँ तपाइँको ब्लग पोस्ट "विश्व मा १० सर्वश्रेष्ठ स्टेकहाउसहरु" तपाइँको साइट मा एम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fne%2Fbest-steakhouses-world%2F- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
A part-time traveler and explorer who loves to share her experience in her writing. I believe in expressing my views firmly and standing by my actions - तपाईं यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ रेबेकालाई सम्पर्क गर्नुहोस्